विहान उठेर के गर्ने ? के नगर्ने ? | BeniOnline.com.np जिल्लाका ताजा अनलाइन समाचार
Home स्वास्थ्य विहान उठेर के गर्ने ? के नगर्ने ?
विहान उठेर के गर्ने ? के नगर्ने ?
२०७७, १५ मंसिर सोमबार ०७:५०
सामान्‍यतया मानिसहरु आफ्नो दैनिकी अनदेखा गरिरहेका हुन्छन् जसले उसको जीवन शैली नै खतरामा पर्न जान्छ। हामी हरेक दिन निदाउँछौं। बिछ्यौनामा पल्टिन्छौ र बिहानी पख उठ्छौँ।विशेषतस् विहान जब तपाइको आँखा खुल्छ, तब के गर्नु हुन्छ त ?
Previous articleराजतन्त्र पुनर्स्थापनाको जुलुसमा सहभागी नहुन आम जनसमुदायलाई सरकारको आग्रह
Next articleदुर्व्यवहारको डरले लुक्न बाध्य संक्रमित